Qalabka Caafimaadka, Device Medical, Laboratory Qalabka - bogsii Force
Bogsii Force bixisaa xal dhamaystiran si ay u daboolaan kordhaya caqabadaha iyo shuruudaha kala duwan ee isbitaalada
Bogsii Force takhasusay deisgn, soo saaridda iyo iibinta qalabka shaybaarka in beerihii Biosafety ilaalinta, isdaahirinta, Biyaha iyo cod Gene.
Pulsoxymetri garaaca wadnaha farta waa aalad qiimo leh in xaalad kasta oo ay loo baahan yahay reading soon iyo sax ah ee heerka ogsiijinka dhiigga iyo garaaca wadnaha.
Codsiga of horumarinta fikradda cusub ee kalkaalinta in waxyaabaha daryeelka ilmaha
Dhidibada loo aasay 1989, bogsii Force Bio-Meditech Holdings Limited waa soo saaraha ah ee qalabka caafimaadka iyo shaybaarka. Waxaan ku adkeeyey iibka iyo netword adeegga adduunka ballaaran ballaaran, kaas oo awood noo siin alaabta iyo adeegyo tayo sare leh macaamiisha.
Ku biir wada hadalka